Consumer amalungelo consumer protection umthetho inika indlela kuba abantu ekulweni emva ngokuchasene abusive ishishini iindlela ezilungileyo. Le mithetho ingaba yenzelwe ukubamba abathengisi bathenga ngamalungelo kwempahla neenkonzo iphendula xa bazama inzuzo xa uthatha ithuba i-consumer ke nokungabikho ulwazi okanye bargaining amandla. Abanye ukuziphatha kuhlangatyezwana yi-consumer amalungelo imithetho ngu ngokulula akulunganga, ngeli lixa ezinye ukuziphatha kusenokuba njengoko kuchaziwe outright ubuqhetseba. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi amabini anesixhenxe iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa E Kilpatrick Townsend Stockton LLP, bethu attorneys ingaba ngokupheleleyo owenza impumelelo ifemi ke abathengi. Thina khulula iziphumo-oriented ingcebiso kuba amakhulu kwaphela stages ka-ukukhula emaphandleni, ukususela ngumngeni iimfuno-mali eyenziweyo kwaye securities ukuba omkhosi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Davis Polk sesinye ihlabathi ke, inkulumbuso umthetho firms. Ezaziwayo kuba zethu skillful umsebenzi highly complex imicimbi asele kakhulu kubathengi bethu, siya kunikela amanqanaba aphezulu ukugqwesha kwaye breadth kuwo onke zethu iindlela ezilungileyo kwaye specialties.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Foley Lardner LLP yi highly ithathwe, umthetho wesizwe ifemi ekuboneleleni umxhasi-focused, ishishini-ethile, iinkonzo ukuba iziphumo high-ixabiso isemthethweni ingcebiso kuba abaxhasi bethu. Zethu senzo kwiindawo encompass ngokupheleleyo umqolo we corporate isemthethweni iinkonzo, kuquka corporate ulawulo ukuthotyelwa kwemithetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Clifford Ithuba sesinye ihlabathi ke ezikhokelela umthetho firms, kunye amabini anesithoba ofisi kwamashumi amabini amazwe kwaye abanye, amabini anamashumi isemthethweni advisers. Enye lwahlulelwano, ifemi sele unrivalled umlinganiselo kwaye ubunzulu isemthethweni zokusebenza kwilizwe liphela, zine — iqhosha kwiimarike Baseamerika, e-Asia, i-Europe kunye Kumbindi Mpuma. Umthetho Ifemi ke Isixhosa abaqondisi-mthetho kwi-Latham ke Tokyo-ofisi ukuqonda iimfuno kwaye imingeni ukuba abaxhasi ubuso. Ngapha umdibaniso ifemi ke intimate ulwazi Isijapanese imarike yayo, baninzi indawo khona ezweni, ifemi ngu ngokugqibeleleyo wabeka ukukhonza umnqamlezo-umda ishishini iimfuno abaxhasi. K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs kwi-wonke enkulu ishishini iqela ngokunjalo necandelo likarhulumente karhulumente, namaziko emfundo, philanthropic organizations kwaye abantu.
Zethu senzo ngu robustly a
DLA Piper waba lelinye oyena isemthethweni inkonzo bamatyala ehlabathini kwi- nge-ukudibana ka-unprecedented ekhaya kwi-isemthethweni kwicandelo lezolimo. Xa inkulu kuzo umlinganiselo, ukudibana isicwangciso-buchule waba elula — ukwenza i-ngamazwe isemthethweni senzo capable ka-ethabatha nokukhathalelwa ibaluleke kakhulu isemthethweni iimfuno zabantu. Ukwakha ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo yonke imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi sele lunxulumano ukugqwesha kuba yayo innovative izakhono kwi-ezemali, ingakumbi kuba umsebenzi wethu kule projekthi. Satsuki Umthetho Ifemi sele kuphethwe iimeko kuba non-Isijapanese abaxhasi kuba ngaphezu amabini eminyaka. Ingakumbi thina ingaba uqinisekile kwi-ngamazwe wokuqhawula umtshato, umntwana custody, umntwana abduction, immigration amatyala. Sathi kanjalo ukukhombisa u-mthetho iimeko, traffic kunokwenzeka ingozi compensations, kwaye abasebenzi kunokwenzeka ingozi imbuyekezo, kuba. Sidley Austin LLP ufumana i-global umthetho ifemi, kunye nama- abaqondisi-mthetho kwi-elinesixhenxe ii-ofisi. Sinike a ngokubanzi umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo ukuhlangabezana neemfuno zethu diverse umxhasi-base. Elicebo kusekwe ii-ofisi zethu kwi qhosha corporate kwaye mali centers yehlabathi sele yenziwe kwethu.
TMI Associates yamiselwa ngowe- kunye kuqhutywe amane anesithoba amalungu
Ukususela zethu foundation, bethu umsebenzi wenziwe ukuba ‘Ukwamkela Entsha Imingeni’ kwaye ‘Ekusebenzeleni Abaxhasi’ Ifuna, apho ngoku bahlala efanayo, nangona eziquqa ukukhula zethu ifemi
Ityala Uqokelelo kwi-Japan